Fambolena sakafo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fambolena sakafo
Ahoana ny fampiasana urea
Ny mpikaroka rehetra, samy efa niaina sy novokarina, dia mahafantatra momba ny urea (carbamide). Zavamaniry samihafa sy tena mahomby ho an'ny zaridaina izany. Amin'izao andro izao dia hiteny aminareo izahay hoe inona ny carbamida, momba ny fitsipika hampiasana azy io ho toy ny vongan-drano, ary ny fomba hiatrehana ny pestisides ao amin'ny zaridaina miaraka amin'ny carbamide. Inona no atao hoe carbamide urea (urea) - diloilo mangatsiaka amin'ny granules, izay ampiasaina amin'ny fambolena sy ny fambolena fambolena, ankoatra izany dia tsy lafo sy vidiny.
Mampiasà hazo lavenona toy ny zezika
Hatramin'ny fahiny, ny olona dia mampiasa hazo lavenona ho toy ny zezika. Ny asan'i Ash dia tsy mamony afa-tsy ny tany ihany. Ny fampiasana ny lavenona amin'ny sehatry ny fambolena ihany koa dia manatsara ny famokarana mônika sy simika amin'ny tany. Ny Ash dia manana toetra hanamaivanana ny asam-panafody, hampitombo ny famoahana ny kompost ary hamotsotra ny tany.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fitomboan'ny castour ao amin'ny dacha
Ny zavamaniry any an-tanety hatramin'ny 2,5-3 metatra ny halavan'ny ravinkazo lehibe ary ny fahatsiarovana ny palm-palmie dia karavasy. Ny karazam-pambolena dia tsy mahazatra, izay manintona mpamboly maro ary miteraka faniriana haniry izany. Ny menaka varahina dia misy tsiranoka mamboly sy fikarakarana eny an-tsaha, izay mendrika ny mamaky.
Inona no sira ao Kalium?
Ireo singa fototra ilaina amin'ny orinasa tsirairay dia potassium, nitrogen ary phosphorus. Manao fanafody sarobidy izy ireo mba hanatsarana ny tany, saingy ny tsirairay dia samy ampiasaina mba hanonerana ny tsy fahampian'ny zavatra iray na iray hafa. Ity lahatsoratra ity dia hitantara ny momba ny siramamy misy potasy - inona moa izany, inona no atao hoe diloilo potassium, ny dikany ho an'ny zavamaniry, ny fantsom-pako, ny fomba ampiasaina amin'ny sehatry ny fambolena, inona no manome potassium amin'ny zavamaniry sy ny famantarana ny tsy fahampiana azy.
Fandefasana entana amin'ny famokarana zana-ketsa Stimul - torolàlana ampiasaina
Ny fingadahin-jiro amin'ny mineraly mineraly dia singa manan-danja amin'ny fitomboan'ny voankazo isan-karazany, satria ny fampidirana ny resaka organika fotsiny dia tsy manome ny sakafo rehetra ilaina. Inona no ilain'ny zavamaniry? Ny tsy fisian'ny phosphorus sy potassium, ohatra, dia miteraka farafahakeliny farafahakeliny amin'ny voankazo, amin'ny tsy fahampian-tsakafo boribory, ny tsiron'ny voankazo na ny voankazo dia tsy ho toy ny manankarena sy fanehoana araka izay irintsika, ary tsy misy azona ny fitomboan'ny voninkazo sy ny voankazo vokatra.
Raha te hahazo vokatra be dia be ianao, dia tsy maintsy mikarakara ireo zavamaniry foana ianao, ary manome azy ireo fialam-boly mahazatra, fa koa ny maka ny lokony. Safidy tsara avy amin'ny tantsaha maro dia ny vokatra biolojika "Shining-2", izay ahitana ny micro micro-organismes amin'ny voankazo voafantina.
Tavoahangy ho an'ny zavamaniry: fomba fanaovana akanjo fiandrasana leviora
Efa hatry ny ela ny tsiambaratelo dia tsy ampiasaina amin'ny fampiofanana sy ny fikarakarana alika ihany ny yeast, fa koa amin'ny fanafody sy ny cosmetology. Safidy iray hafa azo ampiasaina dia ny levona ho an'ny zaridaina ahitra iray, mba hamokarana zavamaniry. Diniho ato amin'ity lahatsoratra ity ny fiantraikan'izany eo amin'ny zavamaniry sy ny fomba hanomezana sakafo ireo zavamaniry amin'ny lefage.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fambolena sakafo